မိုင်းနင်းမိကာခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားသည့် ရှစ်တန်းကျောင်းသား ဆေးကုသရန်အကူအညီလိုအပ်နေ - Myanmar Pressphoto Agency
helpless IDPs MPA News RakhineState
IDP January 19, 2022 ·0Comment
By Kaung Mrat Naing / MPA [ English Below ]
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊အ ထက်မြတ်လှဲကျေးရွာမှ မိုင်းနင်းမိကာခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားခဲ့သည့်ရှစ်တန်းကျောင်းသား၊မြိုလူငယ်မှာ ဆေးဝါးကုသရန်အတွက် အကူအညီများလိုအပ်နေသည်။
အဆိုပါ ရှစ်တန်းကျောင်းသားမြိုလူ ငယ်မှာ ရွာမှတစ်နာရီကျော်ခန့်သွားရသည့် တောင်ထဲတွင် ဟင်းရှာလိုက်သွားစဉ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက မိုင်းနင်းမိကာ ညာဖက်ခြေထောက်ဒူးခေါင်းကနေ ပြတ်သွားပြီး ဘယ်ဖက်ခြေထောက်မှာလည်း ဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ခု အနာမကျက်သေးတော့ ဆေးရုံမှာဆေးကုသဖို့ ငွေကြေးလိုအပ်တာပေါ့။”ဟု မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မိချောက MPA သို့ပြောသည်။
ထိုမြိုလူငယ်မှာ သားသမီးငါးဦးထဲတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ကာ ရှစ်တန်းကို တက်ရောက်သင်ယူရမည်ဖြစ်သော်လည်း မို င်းထိဒဏ်ရာများမကောင်းသည့်အတွ က် ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်သေးကြောင့် သူကပြောသည်။
”အနားကောင်းသွားရင် ကျောင်းပြန်တ က်ချင်ပါတယ်။” လို့ မိုင်းထိမြိုလူငယ်ဦးဘမောင်က ဆိုသည်။ထိုလူငယ်ကို ဆယ်တန်းအောင်ပြီးအေး အေးဆေးဆေးထိုင်လုပ်ရသည့် အလုပ်အကိုင်များရစေလိုကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
”အဲဒီအနာကိုကောင်းအောင် ကုပေးဖို့တော့လိုတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဆေးဆိုင်က ဆေးဝါရည်ပဲထည့်ပေးနေရပါတ ယ်။” လို့ အစ်မဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ မမိုးက လက်ရှိအခြေအနေကို ရှင်းပြသည်။
ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲများရပ်တန့်နေသော် လည်း ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်၊မနေ့ကမြောက်ဦးမြို့နယ်၊ပေါင်းတုတ်ရွာသစ်မှာ စစ်ကျန်လက်ဗုံးသီးပေါက်ကွဲသဖြင့်အသက် ၇ နှစ်နှင့် ၈ နှစ်အရွယ်၊ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်နှစ်ဦး ခြေထောက်နှင့်ဗိုက်တွင် ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မသန်စွမ်းသူများအစ ည်းအရုံးဥက္ကဌ ကိုလှမြင့်က”အခုလော လောဆယ် ၇ မြိုနယ်မှာ သင်တန်းပေးနေပါတယ်။ပြီးရင်ကျောက်တော်၊ရသေ့တောင်၊မင်းပြားမှာ အားပြုကရိယာ ထောက်ပံ့ဖို့ စီမံချက်ရှိပါတယ်။” လို့ MPA သို့ပြောသည်။
ရခိုင်မှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)နှင့်မြန် မာစစ်တပ်တို့ကြား ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကစတ င်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်စစ်ပွဲကာလမှယနေ့အချိန်အထိ ဒေသခံ ၂၀၀ နီးပါး မိုင်းအန္တရယ်ကြောင့် ထိဒဏ်သေဆုံး၊ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုများ ရှိသည်။
Eighth Grader who Lost Leg after Stepping on Mine in Need of Help for Medical Treatment
An young eighth grader man from Htet Myat Hle village, Ponnagyun township, Rakhine State, who lost one leg after stepping onalandmine is in need of help for medical treatment.
The eighth grader,aMro ethnic, lost his right foot – it was broken off from the knee – while he was searching for food in the mountain about one andahalf hour away from the village in July of 2021 and his left foot was also severely wounded. “As the wounds aren’t healed yet, we need money for medical treatment at the hospital’, said, Daw Mi Chaw, the mother.
The Mro young man is the eldest of five children and was supposed to attend the eighth grade but couldn’t continue since his wounds aren’t healed yet.
“Once the wounds heal up, I want to go back to school”, said U Ba Maung, the mine-injured young Mro man.
The mother said he wanted the young man to pass the matriculation and getacomfortable job.
“We really need to cure the wound. As we don’t have money, we’re just applying Septadine fromadrug store”, saidacousin sister, Ma Moe, about their current situation.
Even though fights are ceased in Rakhine, the war remnant bombs exploded yesterday, January 17 anda7-year-old and 8-year-old were injured on the leg and belly respectively.
Chairman of Rakhine State Disabilities Organization, Ko Hla Myint, said to MPA, “At the moment, training is being given in seven townships. Once they’re finished, we plan to provide support equipment in Kyauktaw, Rathedaung and Minbya”.
In Rakhine, due to clashes between Arakan Army (AA) and Myanmar Military from 2018 till today, nearly 200 local residents have been killed and wounded.